Fifaninana famoronan-kira :: Hoentanina amin’ny alalan’ ny mozika ny tanora • AoRaha
Fifaninana famoronan-kira Hoentanina amin’ny alalan’ ny mozika ny tanora
Mikarakara fifaninanana famoronan-kira ny « Médecins du monde ». Tsy hanavahana io na efa matihanina ny mpandray anjara na vao misondrotra. Ny « Fahasalamana ara-pananahan’ny tanora » no lohahevitra voizina.
Malalaka ny safidy ho an’ireo izay liana satria afaka mamorona amin’ny teny manavanana azy izy. Efa tamin’ny volana janoary no nanomboka ny fifaninanana ary amin’ny 25 febroary ho avy izao ny daty farany fanaterana ny hira voaforona. Etsy amin’ny foiben’ny « Médecins du monde », Ampasanimalo kosa no hanaterana azy.
Telo minitra ny halavan’ny hira iray raha be indrindra. Amin’izay maha fifaninanana azy, hisy ny loka ho an’ireo telo voalohany mendrika indrindra. “Tablette” no homena ho an’ny voalohany, finday avo lenta kosa ny an’ny faharoa sy fahatelo. Ankoatra izany, ho alefa amin’ny haino aman-jery isan-karazany ny hira mivoaka ho mpandresy.
“Mahasarika olona kokoa ny fanentanana raha atao amin’ny endrika zavakanto izany”, hoy i Juliana Fanilonirina, tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny “Médecins du monde”. Nanamafy koa izy fa “fomba iray hahafahana mitondra hafatra sy fanabeazana ny hira. Sarobidy ny fahasalamana, saingy mbola saro-pady ary adihevitra manahirana ny fiarahamonina malagasy ny miresaka ny taovam-pananahana. Izany anefa no antony mahatonga ny tanora tsy halala izay tokony hataony ka lasa miteraka olana maro toy ny tsy fahasalamana izany.” Mba hoentina hitaizana ny olona sy hisorohana izany tsy fahasalamana izany indrindra no anton’ny fifaninanana. Ho mora kokoa amin’ny mpihaino mantsy ny mandray ny fanabeazana tiana hampitaina raha toa ka hatao amin’ny alalan’ny hira izany.
Dome RTA Ankorondrano Hotsiahivina amina seho tokana ny hiran’ny taona 60, 70, 80 ary ny 90
Vokatra hiragasy Namoaka ny kapila vaovao ry Ramilison Besigara Zanany
Kolontsaina • Tapatapany
Famelabelaran-kevitra :: Hiresadresaka momba ny fihetseham- po i Joel Andrianomearisoa
Baolina kitra – CAN 2021 Amidy anio avokoa ireo tapakila eny amin’ny “gradins”
Fahapotehan’I Mahamasina Hanembantsembana ny Barea ny haratsin’ny kianja